Ndeipi danho rekugadzira izvo zvinogadzirwa masks Vagadziri uye Vanotengesa - China Fekitori - Quanzhou waimaoniu Import uye Export Trade Co, Ltd.
Ndeipi danho rekugadzira maski rinoraswa?
Maitiro ekugadzira anogonesa masks anotevera:
Kuwedzera kune zviri pamusoro zvinhu zvekugadzira, zvigadzirwa zvekugadzira zvinodiwawo, 1. masiki masiki kugadzira muchina, 2. maski nzeve band nzvimbo welding muchina, 3. maski kurongedza muchina.
Dhizaini yekugadzira: Sunga zvigadzirwa zvisiri-zvakarukwa pane mashekita emashiti, mushini wacho uchangozvigadzira mushure mekurayira, iyo mask mask inobuda, uyezve mask mask anozoendeswa kune nzeve band muchina wekwavo nzvimbo. Kurongedza. Iyi ihafu-yekuzvigadzira yemuchina yekugadzira. Inoda 3-6 vanhu kuti vashande (1 set of main unit + 2 sets of earband unit)
Michina yakazara inoshanda inokwana kushanda-kuponesa uye kushanda-kuponesa. Izvo zvigadzirwa zvakasungirirwa pamarara, uye muchina wacho unobva wazvidyisa. Zvinongoda chete vanhu vatatu kuti vashandise muchina nekudhonza 2 kusvika 3 nzeve matimu ebhendi kubva kumuchina mukuru wemumuviri.